Sida loo sameeyo sawiro qoraal leh | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sawirka laftiisa, ayaa horeba wax badan u sheegaya. Laakiin haddii aad sidoo kale la socoto kelmad, ama odhaah, waxay samayn kartaa macno aad u badan. Si kastaba ha noqotee, qaar badan ayaa tixgeliya, haddii aadan ahayn naqshadeeye, taasi waa mid aad u adag, runtuna waxay tahay in aysan waxba ka fogayn xaqiiqda. Maanta, ogaanshaha sida loo abuuro sawirada qoraalka waa mid aad u fudud waxaana jira qalab badan oo bilaash ah taas oo kuu ogolaanaysa inaad sidaas samayso, oo ay ku jiraan shabakadaha bulshada laftooda.
Laakiin sidee baad u samaynaysaa? Maxay tahay inaad u fiirsato? Hadii aad hayso sawiro badan oo aad jeceshahay in aad qoraal ku darto balse aanad waligaa ka fikirin sababtoo ah waxa aad moodaysay in ay kugu adagtahay, hadda waxa aad arkaysaa in ay ka sahlan yihiin sidaad daqiiqad u malayn karto.
1 Maxay tahay sababta qoraalka loogu dhejiyo sawirka?
2 Barnaamijyada lagu abuuro sawirro qoraal ah
2.1 Barnaamijyada lagu rakibay kombiyuutarkaaga
2.2 Baraha bulshada sida daabacayaasha
2.3 Mareegaha iyo barnaamijyada online-ka ah si loo abuuro sawirro qoraal ah
2.3.2 Akhri tan
2.3.5 xusuus qor
Maxay tahay sababta qoraalka loogu dhejiyo sawirka?
Bal qiyaas inaad haysato sawirka bisad kor ku eegaysa indhahaas ballaadhan. Waxa ugu badan ee caadiga ah ayaa ah in aad dhugato sawirka, marka ugu dambaysana aad dhoola cadeynayso. Laakiin hubaal waxay sidoo kale ku xasuusinaysaa wax maalinba maalinta ka dambaysa ah. Waxaa laga yaabaa in loo jeediyo wejiga yar ee carruurtaadu sameeyaan marka ay wax rabaan.
Waxaa laga yaabaa inaad xitaa filayso bisadaas inay ku tiraahdo ereyada ku xasuusiyay qofkaas kale (ama filimka). Laakiin dabcan, waa muuqaal ... Laftigeeda waa wax cajiib ah, laakiin inaad qoraal ku dhejiso waxa aad sameyso waa sii xoojinta farriinta Dhanka kale, waxaad diiradda saaraysaa qof kasta oo u arka waxa aad rabto inuu ku fekero (xaaladdan, qof kasta oo arka wuxuu yeelan karaa fikrado kala duwan).
Ku dhejinta qoraalka sawirada waa wax caadi ah, tusaale ahaan, in la sameeyo memes (ciyaaraha, dadka caanka ah, iwm.) halkaas oo mid kastaa bixiyo nuqulkiisa iyo fasiraadda sawirka (taasi waa sababta aad u aragto qaar badan oo qoraallo kala duwan leh).
Taasina way adag tahay in la sameeyo? Wax badan kama yara! Runtii aad bay u fududahay in la sameeyo oo xataa uma baahnid inaad leedahay aqoonta naqshadaynta si aad u samayso.
Barnaamijyada lagu abuuro sawirro qoraal ah
Maalmahan waxaad haysataa barnaamijyo badan oo kaa caawinaya inaad sawirro qoraallo ah ku abuurto ilbiriqsiyo gudahood. Ma doonaysaa in aan tusaale ku siino?
Barnaamijyada lagu rakibay kombiyuutarkaaga
Waxaan ku bilaabaynaa barnaamijyada u baahan rakibid si uu u shaqeeyo. Waxay leeyihiin faa'iido ah in sawirada aan loo baahnayn in lagu dhejiyo internetka. Oo waa in, haddii ay yihiin sawirro gaar ah ama aadan rabin inay ku faafiyaan shabakada iyaga oo aan xakameynin, doorashadan ayaa ka fiican.
Xaaladdan oo kale waan awoodnaa ku tali Photoshop, GIMP ama tafatire sawir kasta. Dhammaantood waxay leeyihiin shaqada ah in qoraalka lagu daro sawirka waxaadna bedeli kartaa nooca farta, midabka farta, cabbirka, iwm. Xitaa waxaad ku abuuri kartaa saameyn kala duwan xarfaha ama waxaad ku abuuri kartaa gif firfircoon halkii aad ka isticmaali lahayd sawirro taagan.
Waxay leeyihiin dib u dhac, taas oo ah, Sida ay ugu fiican yihiin ilaalinta sawiradaada, aad bay u dhib badan yihiin in la isticmaalo haddii aanad hore u isticmaalin qalabkan., kaas oo kaa dhigi kara niyad jab oo aanad rabin inaad sii wadato. Waa wax iska caadi ah, laakiin casharrada YouTube-ka waxaad hubaal ahaan u awoodi doontaa inaad ka soo saarto sababtoo ah runtii maaha wax adag in lagu daro qoraalka. Wax kale ayaa noqon lahaa haddii aad rabto inaad ku darto saameyn gaar ah ama aad hesho far aad u faahfaahsan. Laakin marka laga reebo in weedhaha qaar la dhigo iyo laga yaabee hadh si loo caddeeyo, dhib badan kuma yeelan doontid inta kale.
Baraha bulshada sida daabacayaasha
Qaar badan oo ka mid ah shabakadaha bulshada, sida Facebook, ayaa leh shaqada tafatirka sawirka oo waxaad ku dari kartaa calaamado, emojis, iyo sidoo kale qoraal. Dabcan, kuma siin doono doorashooyin badan, maadaama ay aad u xaddidan tahay, laakiin in la sameeyo khiyaamada ma xuma.
Si kastaba ha ahaatee, Ma aha mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee la isticmaalo sababtoo ah waxaad leedahay xaddidaadyo badan marka ay timaado meelaynta qoraalka si gaar ah.
Mareegaha iyo barnaamijyada online-ka ah si loo abuuro sawirro qoraal ah
Haddii aadan rabin inaad madaxaaga kululeyso oo aad sameyso sawirro jumlado ah dhowr daqiiqo gudahood, markaa waxaa fiican inaad isticmaasho aaladaha internetka iyo codsiyada waqti badan badbaadiya.
Kuwa aan kula talin karno waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Waa mid ka mid ah boggaga, si loo isticmaalo, waa inaad isdiiwaangelisaa, laakiin way u qalantaa liiska sawirada (dhammaantood waa bilaash si aad uga fogaato dhibaatooyinka xuquuqda daabacaadda, iyo sidoo kale 17 nooc oo xarfo ah. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhigto meel kasta oo aad rabto, in ay ka weyn yihiin ama ka yar yihiin, iyo in ay ku habboon yihiin sawirka. Maxaa dheeraad ah oo aad codsan kartaa?
Xaaladdan oo kale qalabkani waa aad u xaddidan maadaama waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ay tahay inaad geliso kelmad, midda aad rabto, xagga hoosena waxay ku siinaysaa fursado dhowr ah (oo aad uga duwan midba midka kale) si aad u aragto sida ay u muuqato mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Dabcan, waxay ku kooban tahay sawirro yar oo keliya, taas oo macnaheedu yahay, haddii aad ku bixiso dhammaantood, boggani kuma sii adeegi doono.
Xaaladdan oo kale waxaad isticmaali kartaa nooca bilaashka ah halkaas oo aadan iska diiwaan gelin oo ay tahay inaad sameyso oo dhan soo rar muqaal oo billow in aad ku faraxdo si aad u jeceshahay. Marka aad dhammayso, waxa aad gacanta ku haysaa xarfo badan si aad u geliso jumlada ku habboon sawirkaas. Marka, in kasta oo ay qaadan doonto wax yar ka badan bogagga kale, waxay noqon doontaa naqshad ku dhawaad ​​laga sameeyay xoq (waa sida barnaamijka tafatirka sawirka laakiin waa ka fudud).
Iyo ka hadalka barnaamijyada tafatirka sawirka, waxaad haysataa Pixir, oo iftiin leh ama nooc buuxa ah. Labaduba waa bilaash, kan buuxana wuxuu u dhaqmaa sida Photoshop. Laakiin haddii aadan lahayn xirfad badan, waxaan kugula talineynaa nooca iftiinka.
Adigaa sawirro bilaash ah iyo sidoo kale far badan oo laga dooran karo weedhaas aad rabto inaad ku dhejiso. Sidoo kale, waxaad bedeli kartaa cabbirka farta, midabada, leexin kartaa, iyo qaabab kale oo badan.
Hadaad rabto inaad lahaato ugu yaraan 50 doorasho oo aad kala dooran karto, fursadaha chromatic iyo qaar ku baaqaya feejignaan (sida xarafka ugu horreeya wuxuu u eg yahay calaamad), ka dib waa inaad tijaabisaa qalabkan.
Dhammaan inaad sameyso waa go'aaminta naqshadeynta waana taas, dhab ahaantii xitaa uma baahnid inaad ka fekerto sawirada.
Waxay leedahay hal cillad oo keliya, taas oo ah, si aad u isticmaasho, waxaad u baahan tahay inaad isdiiwaangeliso.
Sida aad arki karto, waxaa jira fursado badan oo lagu abuuri karo sawirro qoraal ah. Sidee caadiyan u qabataa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Sida loo abuuro sawirro qoraal ah